Sheekh Shariif oo weerar afka ah ku qaadey Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Sheekh Shariif oo weerar afka ah ku qaadey Farmaajo
Doorashadda caga-jiidaysa waxay dhaawacday kalsoonidii shacabka iyo rajadii laga qabey in dalka uu ka baxo nidaamka jahwareerka siyaasadeed iyo qabiilka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii 7aad ee Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa weerar kulul oo dhanka afka ah ku qaadey Farmaajo, oo ku fashilmay mas'uuliyaddii loo doortey.
Waxuu sheegay in xaaladda hubanti la'aanta doorashadda uu sabab u yahay Farmaajo, islamarkaana ay ka dhalatay xil-gudasho la'aantiisa, maadaama uusan ka shaqeynin sidii dalka doorasho uga dhici lahayd marka uu dhamaado mudo-xileedkiisa Feb 8.
Sheekh Shariif ayaa wax aan sax ahayn ku tilmaamay habdhaqanka Farmaajo, ee ah inuu sida uu doono u adeegsadey mas'uuliyadda umadda u hayay, taasoo keentay inuu ku fashilka xilka Madaxweynaha, maadaama uu marayay waddo qaldan.
Madaxweynihii hore ayaa ku xusay in Soomaaliya ay ka dhici jirtay doorashadda afartii sano mar, iyadoo dowlado dafiic ah ka jiraan, balse hadda xaaladda mugdiga ah ee la galay ka timid qaladaadka Farmaajo, oo ku hogaamin waayay dalka wadadii saxda ahayd.
Doorashadda dib u dhaceeda waxaa ka dhashay xasilooni la'aan siyaasadeed iyo dhaqaale xumo, waxaana fara ka baxay amniga, iyadoo hay'adihii dowladda ee mudo-xileedkooda dhamaadey ay ka socdaan musuq-maasuq iyo boob hantida dadweynaha.
Sheekh Shariif ayaa ugu baaqey dowladda xil-gaarsiinta iyo Maamullada inay qaataan doorkooda, oo ay soo dejdejiyaan doorashadda, si loo daba-qabto Soomaaliya, oo qarka kasii dhacaysa, kuna socota jidki burburka dowladnimada.
Comments Topics: farmaajo sheekh shariif soomaaliya